Mareykanka Oo Amar Ku Bixiyay In Cunaqabateyn Dhanka Hubka Ah Lagu Soo Rogo Koonfurta Suudaan | Saxil News Network
Mareykanka Oo Amar Ku Bixiyay In Cunaqabateyn Dhanka Hubka Ah Lagu Soo Rogo Koonfurta Suudaan
November 18, 2016 - Written by Abdisalaan Harir
Maraykanka ayaa taageero u muujiyay hadal ka soo yeeray la taliyaha Qaramada Midoobay u qaabilsan ka hortagidda xasuuqa oo ku baaqay in cunaqabatayn dhinaca hubka ah la saaro Suudaanta Koonfureed.
Safiirka Maraykanka u qaabilsan hawlaha Qaramada Midoobay, Samantha Power ayaa sheegtay in dalka uu qarka u saaran yahay in uu dib ugu noqdo dagaal sokeeye, loona baahan yahay in hadda la qaado tallaabo deg deg ah.
Balse Ruushka ayaa ka horyimid baaqaasi oo uu ku sheegay mid aan gacan ka geysan karin xalinta colaada Suudaanta Koonfureed.
Mar sii horreysay ayaa ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan ka hortagidda xasuuqa waxa uu Golaha Ammaanka u sheegay in dagaalkan uu seddax sano ka hor ku saleysnaa siyaasadda haddase uu qarka u saaran yahay inuu si buuxdo isugu rogo colaad sokeeye.
Dagaaladaasi ayaa billowday bsihii December ee sanaddii 2013-kii walina si goos goos ah ayay u socdaan inkastoo heshiis nabadeed la kala saxiixday sanadkii la soo dhaafay.
Qaramada Midoobay ayaa hore ugu eedaysay ciidanka dowladda iyo xoogagga falaagada ku xadgudubka xuquuqda aadanaha, laakiin madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha fallaagada, Riek Machar ayaa beeniyay eedeyamahaasi.